Pokémon GO yaive pasi nezuro kutenderera pasirese neDDoS kurwisa | IPhone nhau
Kwemavhiki mashoma ikozvino, zvinoita sekunge pasina imwe app kana mutambo uri kutaurwa nezvazvo pane yega tech blog. Tichisiya parutivi kana tichida kana kutaura zvakanyanya, chazove chishandiso chine ruvengo chataneta nacho kunzwa hurukuro yakawanda, kuna Kesari zviri zvaKesari. Ichi chishandiso chakatangwa muUnited States, New Zealand neAustralia ivo vatove mune yakakura nhamba yenyika dzeEurope, kusanganisira Spain, asi isu hatina nhau dzekuti ichakwanisa kusvika riini muLatin America, nekukurumidza patinozviziva isu tinokuzivisa iwe nekukurumidza.
SERVER UPDATE: Zvinoenderana ne @Vanozvimiririra, #PokemonGO maseva akatorwa pasi mukurwiswa kweDDOS. Isu tichagadzirisa kana isu tiine rumwe ruzivo.
- Pokémon GO Nhau (@PokemonGoNews) July 16, 2016
Kuvhurwa mune dzimwe nyika dzeEurope kunogona kuve kwekuwedzera kuedza kwevaNintendo maseva anotsigira mutambo uyu uye kubvira masikati nemugovera, maseva akatanga kukundikana. Asi zvaive zvisiri nekuda kwekuwandisa kwevateveri, asi izvozvo sevha dzakapunzika nekuda kwekuramba kwekurwiswa kwebasa, zvinonyatso kuzivikanwa seDDoS, kuitira kuti nezuro yaisagona kutambwa mune chero nyika uko mutambo unowanikwa zviri pamutemo. Iyo Pokémon GO Twitter account yakazivisa kuti yaive ichirwiswa neDDoS uye kuti ese maseva aive pasi.
Sezviri pachena ndivo vane mhosva yekurwiswa uku iboka rinonzi PoodleCorp, uyo anga achida kuve nemukurumbira nekushungurudza mamirioni evashandisi vasina kukwanisa kunakidzwa nemutambo uyu kwezuva rakazara vhiki rino. Ngatitarisirei kuti Nintendo anocherekedza kurwiswa uku uye achiedza kugadzirisa ramangwana matambudziko erudzi urwu, kana zvisiri izvo zvinoda kuti fivha yePokémon GO igovaniswe neanenge munhu wese kuti inyangarika nekukurumidza. Pakupera kwezuro, nguva yeSpanish, sevhisi yacho yanga ichitoshanda nemazvo, kunyangwe kubatana nemaseva kwaive kunonoka zvishoma pane zvakajairwa, kunyangwe mune dzimwe nyika ichine matambudziko ekushanda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Pokémon GO yaive pasi pasi nezuro neDDoS kurwisa
Ndiri kufara zvakawanda ndinovimba vari kugadzirira kumwe kurwisa
Iko kunogara kune moron ... nguva dzose
Uya viciatee uine rombo rakanaka masikati ano zvakafanana. Pfungwa yemutambo yakatendeka yakanaka asi pokemon iri pakati pegore 2016 inonhuwirira
Moron inogara ichisvetuka ... Nguva dzose ...
parizvino haanditenderi kuti ndipindewo
Chinyorwa chidiki… .Nintendo haasi iye anokonzeresa chirongwa ichi zvachose, zvinongobhadharisa komisheni kubva muchikamu chemubatsiro, mutambo uri mukutarisira Niantic uye Iyo Pokemon Kambani.
Poke Radar, imwezve chitsotsi paApp Store